Inkululeko yeJayBird, ii-headphone ezingenazingcingo zeembaleki ezininzi | Iindaba zeGajethi
Inkululeko yeJayBird, ii-headphone ezingenazingcingo zeembaleki [UHLAZIYO]
UJayBird luphawu oluzelwe kwiimfuno zeembaleki ezazithanda imidlalo egqithileyo kunye nomculo ngokulinganayo. Ke, ngo-2006 bathatha isigqibo sokuseka iJayBird, inkampani esele yazibeka njengenkokeli kolu hlobo lweemveliso zetekhnoloji. Namhlanje siza kukubonisa indlela iJayBird Freedom esebenza ngayo, mhlawumbi yenye yezona zixhobo zingcono ezingenazingcingo zeembaleki onokuzifumana kwimarike. Ezi ntloko-ntloko ziyilelwe ngokucacileyo ukukhawulelana neemfuno ezininzi, ukungahambelani kunye nomgangatho wezinto zazo ezibenza babheje ngokucacileyo xa usebenzisa olu hlobo lwezixhobo zemidlalo.
Ukusukela oko bamiliselwa ngokusesikweni eSpain, besikhe sazivavanya ezi ntloko kwiimidlalo, kwaye ndiza kunika uluvo lwam, lukhatshwa luhlalutyo, malunga nendlela abanomdla ngayo kuluntu olunzima kakhulu. Ukuqala, makhe siqwalasele loo nto iimbaleki ezingafuneki kangako okanye ngamanye amaxesha zinokufumana 'kakhulu' kwezi headphone, zijolise ngokucacileyo kwabo benza imidlalo ubomi babo, olonwabo lwabo lusekwe kuwo, kwaye abafuna kuphela okona kulungileyo ukuhamba neseshoni yoqeqesho lwabo.
1 Izinto ezinqabileyo azifane zibonwe kwii-headphone ezinje
2 Umgangatho weaudio kwii-headphone ezincinci
3 Ukhuseleko-ulungile: ii-headphone zakho azizukuwa kwakhona
4 Imiba yezobugcisa
5 Ukufumaneka kunye noluvo lomhleli
Izinto ezinqabileyo azifane zibonwe kwii-headphone ezinje
Into yokuqala ephumayo kwezi headphone xa uzibambe ezandleni zakho kukuba enye into yahlukile. Kwaye kakhulu kangangokuba, usale kakuhle ngeplastiki okanye ngeepolycarbonates Ezi ntloko zenziwe ngazo I-aluminium engaziwayo, ukubanda okunganyangekiyo kunye nokunganyangekiyo kukwenza uqaphele ukusuka kumzuzu wokuqala ukuba uphambi kwee-headphone ezahlukeneyo. Kwaye kunjalo, zombini izixhobo zokuva kunye neqhina lolawulo zenziwe ngealuminium, nangona ulawulo lweqhina linenxalenye encinci yeplastiki, oku akunjalo ngezincedisi zokuva. Ngokuzibeka endlebeni yakho uyaqonda ukuba azizukuqhekeka, ubuncinci ziya kuvumela ukubila kungene kumacandelo azo.
Kwenzeka into efanayo ngekhebula, ekubonweni kokuqala kunokubonakala ngathi kuthe kratya kunaleyo yee-headphone ezikhuphisanayo, kodwa ukwenziwa kwayo kugweba ubungakanani, kwaye kuyilelwe ukuba kuchasane nezinto ezonakalisayo ezibangelwa ngabantu xa singena ukuzilolonga noxinzelelo, sithetha ngokubila.
Ukongeza, amakhwenkwe kaJayBird asixelele ukuba anendawo yokuhlala umgangatho womsindo, kwaye ngenxa yoku, ukuba nendawo ye-Bluetooth egcweleyo, bekuyimfuneko ukwenza izinto zentsimbi, eziza kuqinisekisa ukwamkelwa okuphezulu kakhulu, kwaye kube njalo.
Umgangatho weaudio kwii-headphone ezincinci
Sikhupha ii-headphone kwaye nantsi into esiya kuyo, into yokuqala kukuzidibanisa nezixhobo zethu eziphathwayo, ukukhangela iSpotify, ukubeka "umgangatho ogqithileyo" ukuze unganyelisi uhlalutyo kwaye ... Ziviwa, kwaye ziviwa kakhulu kulungile, nangona kunjalo, lUqwalaselo oluqhelekileyo mhlawumbi lusinika ezinye iindawo ezifihliweyo. Nangona kunjalo, nje ukuba ujonge ibhokisi uyabona ukuba awenzanganto ilungileyo.
I-JayBird Freedom ayizizo ii-headphone ezenzelwe ukuba uze uzifake. Iqela leJayBird lisebenze nzima kakhulu kwi-app ebizwa MySound, ngayo, siya kuba neendlela ezininzi: Khetha ukulingana kwesandi okulungele iimfuno zethu; Thatha ithuba lokulinganisa abanye abasebenzisi abalayishileyo; Thatha ithuba lokuseta kweembaleki ezinobungcali ezisebenza noJayBird kwaye basebenzise iinkqubo zabo zesandi.
Ke izinto ziyatshintsha, kwaye kukuba ezi ntloko ziya kulungelelanisa naluphi na uhlobo lomsebenzisi, ukuba uyayithanda ibass, umculo weklasikhi okanye ukhetha i-acoustic, ngekhe kubekho ngxaki ukufumana uluhlu lwakho lweaudio oluthandayo, kufuneka uyiqwalasele. Ukongeza, ii-headphone zinememori encinci egcina iisetingi zesandi, ke ukuba sitshintsha isixhobo esiphathwayo, ii-headphone ziya kuqhubeka zivakala ngendlela esithanda ngayo.
Ukhuseleko-ulungile: ii-headphone zakho azizukuwa kwakhona
Eyona ngxaki iphambili abajamelene nayo abo kuthi abalekayo (nokuba kukwitayitile yokunyathela okanye esitalatweni), okanye abo bakhwela ibhayisekile rhoqo, kuyafana njalo, ii-headphone ziyawa. KwaJayBird bayithathele ingqalelo le nto, hayi inye, hayi ezimbini, kodwa zintathu amanyathelo okhuseleko aya kwenza ukuba ii-headphone zingasuki endaweni yazo:
Banobubanzi Uluhlu lweephedi ezisezindlebeniZombini zenziwe nge-silicone kunye nezinto ezintsha ezinemigca emincinci eyandayo ngaphakathi komsele wendlebe kwaye iyithintele ukuba ingaphumi. Kwelinye icala, amagwegwe afikelela kubukhulu obune aya kulungelelana nokujika kwendlebe, ngale ndlela, baya kuthi basebenzise imingxunya yabo kwaye basebenze njengeankile yee-headphone.
Iifowuni ezenzelwe ukuba zihlale kamnandi, ke, Ziyahlukahluka kwaye ziyasivumela ukuba sizibeke endlebeni ngendlela eqhelekileyo kwaye ukusuka phezulu, le yokugqibela yeyona ndlela ifanelekileyo yokubaleka. Kwelinye icala, uyilo lwe-ultra-slim kuthetha ukuba singazisebenzisa nokunxiba isigcina-ntloko ngaphandle kokuphazamisa.
Okokugqibela, ii-headphone babe nenkqubo yokwaluka ngasemvaNgokudibanisa isikhokelo esincinci esibandakanya ibhokisi, sinokwenza iqhina elikhethekileyo elilingana neefowuni entloko, ngokungathi ziyinxalenye yethu.
Ezi ntloko zineeyure ezi-4 zokuzimela, eziza kwandiswa ziye kwiiyure ezi-4 ezingaphezulu ukuba sizincamathisela kwitshaja yazo, kwaye UJayBird uqulunqe inkqubo yokutshaja emtata Incinci kakhulu incamathele kwiqhina lolawulo kwaye ineebhetri zayo, eziza kwandisa ukuzimela kwesixhobo ukuya kuthi ga kabini.
Ukongeza, inetekhnoloji Izinto ezininziNgale ndlela sinakho ukuba ii-headphone zidityaniswe ngaphezulu kwesixhobo esinye ngaxeshanye.
Iqhina lakho lolawulo iyahambelana iOS kunye Android, ke enkosi kwimakrofoni yayo siya kuba nakho ukulawula ukudlalwa komculo ukuphendula iifowuni, ngaphandle kweengxaki ezininzi. Ngokuphathelele umsindo, sinesidima se-16 Ohms, sikhatshwa sisiphumo esiphezulu se-10mW. Banobuchwephesha beBluetooth 4.1 ngebhendi yamaza ye-2,6 GHz, eyona ixhaphakileyo kwaye inobunzima obuyi-13,8 yeegram kuphela.
Ukufumaneka kunye noluvo lomhleli
Ungazifumana ezi ntloko Yee- € 165,40 eAmazon Ngesibonelelo esikhethekileyo, nangona kunjalo, ixabiso eliqhelekileyo liya kuba malunga ne-195 yeerandi kubo bonke abanye abathengisi. Ngokubhekisele kwimibala, bomvu, bhlowu, mhlophe kunye negolide zezona zihamba phambili. Kwelinye icala, kwiVenkile yeApple siza kufumana imodeli ekhethekileyo epinki eya kuvuyisa abasebenzisi abaninzi.
Ezi nkululeko zikaJayBird ngokucacileyo azibizi. Nangona kunjalo, njengoko senditshilo, Ezi headphone zenzelwe iingcali, ezona zifunwa kakhulu kunye nabathandi bezemidlalo. Ayisixhobo sabasebenzisi maxesha athile, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, abayi kushiya nabani na ozama ukungakhathali.
Phantse kuyimfuneko ukubaqwalasele
Ulawulo lunokuba lincinci
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Inkululeko yeJayBird, ii-headphone ezingenazingcingo zeembaleki [UHLAZIYO]
Ungandixeleli ukuba uboleke iiJaybirds ukuba ziphinde ziqwalaselwe? Yintoni impumlo !!!
Ecaleni kwam ndinabo uRaúl =)
Iphela, isoftware apho ubukrelekrele bokusebenzisa bunokusebenzisa ikhompyuter
Iqela labaphangi liba ngaphezu kwezigidi ezingama-85 zeAkhawunti ze-Dailymotion